Ubuchwepheshe bokusika - I-AOOD Technology Limited
Ubuchwepheshe bokusika bekulokhu kuyisisekelo sokuthuthuka kwe-AOOD selokhu sasungula. Sinobuchwepheshe obuholela ekushayweni kwezilayidi ukuxazulula izinkinga zokudlulisa ugesi eziyinkimbinkimbi ezinhlelweni ezahlukahlukene. Futhi singakwazi ukuhlanganisa ne-fiber optic / coax yethu amalunga ojikelezayo ukuze sinikeze amakhasimende ethu izixazululo eziphelele ezijikelezayo zesikhombimsebenzisi ngokusebenza kahle okukhulu nokuthembeka.
Eminyakeni engama-20 edlule, sinaka kakhulu ukufunwa kwamasongo okushelela kuzicelo ezisezingeni eliphakeme. Emkhakheni wezokuvikela, singakwazi ukuphatha ngobuciko kuze kube yizinkulungwane zamasekethe wamandla aphezulu nedatha esikhaleni esilinganiselwe kakhulu, futhi siqinisekise ukuthi lamasongo okushelela azoba nokusebenza okuphezulu nokwethembeka endaweni enokhahlo. Saze sathuthukisa nochungechunge lwamasongo amancane amasampuli amasiliphu ukuhlangabezana nezimpawu ezinhlobonhlobo zokudluliswa kwedatha esikhaleni esilinganiselwe ngokweqile. Emkhakheni wezasolwandle, singanikeza amayunithi we-ROV slip ring ahlanganisiwe anamalunga we-fiber optic rotary kanye namalunga ajikelezayo ajikelezayo, ambozwe nge-IP68 futhi agcwaliswe uwoyela ngokusebenza kwe-subsea. Emkhakheni wezokwelapha, izindandatho zethu ezinkulu ze-pancake slip amaskena we-CT anganikeza kuze kufike ku-2.7m ngokudluliswa kwedatha yejubane nokuxhumana okungathintwa kakhulu> ama-5Gbits.